Ducada ganacsiga. ? Shaqo iyo Badnaan | Saint Jude Thaddeus
Salaadda ganacsiga dunida Ruuxi ahaaneed waa xaqiiqo jirta oo aynaan ka baxsan karin ama iska indho tiri karin, taasi waa sababta marka aan bilaabayno dadaal cusub ay fiicantahay in la sameeyo a u duceeya ganacsiga Waxaan bilaabaynaa
Inuu noqdo ganacsi barakeysan, sidaas darteed tamartu wanaagsanaato mar walba. Waxaan weydiisan karnaa barwaaqo iyo in qof kasta oo soo gala meheraddayada uu dareemo nabad iyo xasillooni.
U soo ducee meheraddu daruuri maahan inay noqoto goorta ay bilaabaneyso, waxaan u duceysan karnaa ganacsiyadii horey u lahaa waqti socodka.
Muhiimadu waxay tahay in laguugu duceeyo magaca Aabaha, Wiilka iyo Ruuxa Quduuska ah oo aan aaminsanahay in salaadda aan tukanay ay tahay mid awood leh.
Xaaladahaas halka ganacsigu aanu ahayn annaga laakiin uu ka yimid saaxiib ama xubin qoyska ka mid ah, waxaan sidoo kale u duceyn karnaa in ganacsigaas loo duceeyo oo si weyn loogu barwaaqoobo.
1 Salaada ganacsiga Maxaa loogu talagalay?
1.1 Salaadda in la barakeeyo ganacsiga
1.2 Shaqo iyo ganacsi badan
1.3 U soo duceeynta St. Jude Thaddeus ganacsiga
2 Ma dhihi karaa 3 jumladood?
Salaada ganacsiga Maxaa loogu talagalay?
U duceynta ganacsigu waa muhiim sababta oo ah tan waxaan ku heli karnaa dariiqii ay ganacsigaasi qaadi laheyd, xasuusnow in marar badan aan dooneynno inaan sameyno hal shay markaan runtii ku qasbanaano inaan sameyno wax aad uga duwan tani waa markii salaadda waxaan ku heli karnaa cinwaanka aan u baahanahay in go'aanno wanaagsan la gaadho oo jidka saxda ah loo maro.
Waxaan nahay ruux aqoon u leh inaan lahadalno Ilaah iyo quduusiinta, ma sugi karno mid kale inuu yimaado oo aan u duceeyo waxayaabahayadu, dabcan waxaan isku halleyn karnaa saaxiib ama xubin qoyska ka mid ah laakiin masuuliyada ruuxiga ahi waa shaqsi, sidaa darteed waa inaan baranaa inaan aaminno Salaad noo gaar ah
Ma weydiisan karno barwaaqo dhaqaale haddii aan aaminsanahay inay suurta gal tahay inaan gaarno, si ka badan barashada barashada salaadda.
Waa inaan aaminsanahay in salaadda aan tukanayno ay gaari doonto jannada oo ay fulin doonto ujeeddada aan weydiisanno.
Sug jawaabtaada salaadda waxay noqon kartaa waxa ugu adag laakiin Haddii aan aamino, runtii waxay qaadan doontaa waxaan weydiisanay wax badan oo aan imaan karno.
Salaadda in la barakeeyo ganacsiga
Gacaliye Sayidow, waxaan kaa codsanayaa caawintaada si aan u bilaabo ganacsi ii gaar ah. Waxaad tahay xulufadeyda ugu xoogga badan iyo lammaanaheyga ugu fiican.
Fadlan igu soo biir dhacdadan cusub si aan u guuleysto. Aniga ahaan, qoyskeyga iyo macaamiisha aan u adeegi doono. Ii ogolow awoodahaaga caqliga wanaagsan.
Xikmaddaada iyo hagidaada ganacsigeyga si aan u guuleysto oo aan u sameeyo waxa saxda ah. Dhamaanteen waxaan nahay magaca jannada.
Barwaaqo, faseexnimo, jihayn go'aanno, fikrado cusub iyo codsiyo badan oo aan hor dhigi karno Ilaaha wax walba sameyn kara ee na siiya gargaarkiisa naxariis leh.
Ma jiro qof kaaga aqoon badan baahiyaha ka soo bixi kara meheraddaada, la hadal Ilaah oo u soo bandhig mid kasta oo iyaga ka mid ah isaga.
Xusuusnow in tukashadu ay la hadlayso Ilaah, ka dibna la hadal isaga oo ha ilaawin inaad siiso wakhti uu kaga jawaabo, si aad ugu dhaqaaqdo qaybaha kuu habboon.
Wax waliba maahan inay u dhacaan sidii aan rabnay inay iyagu u dhacaan, laakiin haddii aan Rabbiga ku kalsoonahay, waxaa hubaal ah in wax kasta oo dhaca ay u socdaan barakoteenna.
Shaqo iyo ganacsi badan
Gacaliye Sayidow, waxaan kaa codsanayaa caawintaada si aan u bilaabo ganacsi ii gaar ah. Waxaad tahay xulufadeyda ugu xoogga badan iyo lammaanaheyga ugu fiican. Fadlan igu soo biir dhacdadan cusub si aan u guuleysto.
Aniga ahaan, qoyskeyga iyo macaamiisha aan u adeegi doono. Ii ogolow awoodahaaga caqliga wanaagsan.
Dadbadan ganacsi cusub bilow waxayna rabaan inay ku raaxaystaan ​​barwaaqo iyagoon ka warqabin inay si tartiib tartiib ah u soo socdaan inta aan shaqeyneyno.
Sidaa darteed weydiinta barwaaqo la'aan iyadoo aan shaqeyn ayaa micneheedu tahay wax aan waxtar lahayn. Baybalku wuxuu ina barayaa in iimaanka la'aan shaqo la'aantu ay dhinto, sidaa darteed waa inaan Ilaah weydiisanaa inuu na siiyo wax badan, laakiin sidoo kale inuu inaga shaqeeyo si aan u gaarno.
Waa inaan baranaa sida loo sameeyo jumladaha si sax ah, ma weydiisan karno wax aanan dhab ahaan ubaahneyn, waxaan weydiisannaa waxyaabo qiimo leh laakiin dhaqaale ahaan.
Tusaale xikmad, iyada oo aan ku gaari karno wax badan.
U soo duceeynta St. Jude Thaddeus ganacsiga
San Yahuza Tadeo,
Xilligan xaadirka ah waxaan kaa baryaynaa inaad noo duceyso Aabahayaga jannada ku jira,
Isha shaqada ee dad badan iyo cunto reeraheena,
Dabool gees kasta oo barakooyinka,
Iyo inta ka shaqeysa oo dhan,
Si ay camalkeennu u barakeeyaan Ilaaha ugu sarreeya,
Oo isagu ha ku farxo hortiisa.
Ha u oggolaanin gudaha goobta shaqadan,
Laaluush ama midho ka mid ah ganacsiga xun ayaa la aqbalaa,
Wax kastoo aan qabanno sharaf iyo karaamo ha ku lahaado,
Aynu si daacadnimo ah ugu shaqeyn karno
Ku dallacaya wixii caddaalad ah oo jacayl ugu adeegaya walaalaheen,
Naga caawi inaan gaarno yoolalka loo dejiyey ganacsigayaga iyo ganacsigayaga.
Waxaan kaa baryaynaa inaad na dhex dhigto jacaylka Ilaah,
Dhammaan kuwa meeshan ka shaqeeya,
Oo waxay noqon kartaa jacaylka Ilaah iyo qoysaskeena,
Kuwa naga caawiya inaan qabanno shaqo sharaf leh,
Ammaan fikirkeena, ficilkeena iyo ereyadeena,
Waxaan kugu baryaynaa magaca Badbaadiyeheenna, Aamiin.
Ereyga Eebbe wuxuu ina barayaa inay tahay inaan barwaaqoobo sida nafteenu u barwaaqaysan tahay oo aan doonayno boqortooyada Ilaah iyo caddaaladdiisa iyo wax kasta oo lagu dari doono, markaa waxaan xoogga saareynaa dhammaan tamarteenna si aan u quudinno ruuxdeena, habkan waxaan u dammaanad qaadaynaa in barwaaqo yimaado jidka maxaa yeelay Ilaah baa ballan qaaday.
Aynu aamino tukashada iyo shaqada si wixii aan dalbano ay dhakhso noogu soo gaadhaan.
Ma dhihi karaa 3 jumladood?
Ma u tukan kartaa wax ka badan tukasho xoog badan oo ku saabsan shaqada ganacsiga iyo badnaanta ilaa Ilaah iyo St. Jude Thaddeus?
Haa waad tukan kartaa.
Waxa muhiimka ahi waa inaad ku tukatid caqiidooyin badan qalbigaaga.
Hadaad iimaan leedahay oo aad aamminsan tahay inay wax walba hagaagayaan waad tukan kartaa dhibaato la'aan.
Xusuusnow inaad kaliya aamminsan tahay in wax waliba hagaagayaan!